MA-688 Real-Nguva ndeye mari fluorescence yakawandisa PCR chishandiso ine yakazara yakavhurika dhizaini yakagadzirirwa maQPCR anotanga uye madiki marabhoritari akavakirwa paMA-6000 akateedzana technical platform.
UF-300 Chaiyo-Nguva PCR
Sisitimu Flyer V1.0
Yakareba kutendeuka nguva yePCR bvunzo uye yakakura uye inorema chishandiso ndidzo dzakakoshesa kudzikamisa kupararira kweiyi yakanyatsojeka uye inonzwisisika nzira yekutsvaga mune poindi-ye-yekuchengetedza maitiro ekuongorora.
Batsira hutano hwevanhu vese uye uve nechokwadi chekuchengetedza chikafu,
uye kubatsira ruzhinji.
Shanghai Chuangkun Biotech Inc.iwo mupi webasa anoongorora mashandiro ekuongorora majini uye kuchengetedzwa kwechikafu / kurapwa kwePOCT nekukurumidza mamorekuru ekuongorora mhinduro. Vavambi vekambani ndivo vatungamiriri vakuru uye vashandi vekambani vehunyanzvi vemabhizinesi makuru avo vanga vachiita IVD kana maindasitiri ane hukama kweanopfuura makore gumi. Ivo vane yakazara kufukidza kubva kuR & D, musika kune kutengesa, uye vane hupfumi indasitiri ruzivo. Kambani huru bhizinesi rinotungamira rine mikana yakawanda yemusika, uye hunyanzvi hwayo hunotungamira uye hunokwikwidza.